‘सरकार हाम्रा नागरिकलाई खोप चाहियो - Sidha News
‘सरकार हाम्रा नागरिकलाई खोप चाहियो
पर्वत — कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘सरकार हाम्रा नागरिकलाई खोप चाहियो । स्थानीय सरकार र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी कहिलेसम्म खटिरहने ? अब ढिलो नगरी हाम्रा नागरिकलाई तुरुन्त खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
पर्वतका गाउँबस्तीमा समेत कोरोना महामारी फैलिरहेको छ । यस्तो बेला जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यकर्मीको टोली लिएर उपचार, स्वाब संकलन गर्दै घरदैलो गरिरहेका छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि हरेक नागरिकलाई खोप पुर्‍याउन अनिवार्य भएको जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ ।
‘स्वाब संकलन, अक्सिजन, बिरामी ओसार्ने भन्दै कहिलेसम्म खटिने हो,’ उपप्रमुख लामिछानेले भनिन्, ‘खोपको प्रभावकारिता सबैतिर देखिइसकेको अवस्थामा हामी त्यसमा किन नलाग्ने ?’ यसमा स्थानीय पालिका एक्लैको केही उपाय नलाग्ने भएकाले केन्द्र सरकारसम्म दबाब पुग्नुपर्ने उनको राय छ ।
फलेबास नगरप्रमुख पदमपाणि शर्मा संघीय सरकारले बजेट पठाएर खोप खरिद गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमितको पहिचान गरी संक्रमण नभएकालाई खोप लगाउँदै जाने हो भने केही महिनाभित्रै यो महामारी साम्य हुन्छ ।’
कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी पनि अब खोपको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘खोपले सबैतिर सुरक्षित हुने भएपछि त्रासमा सधैं किन बस्ने ?’ उनले भने ।
बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले महामारी नियन्त्रणको अबको विकल्प खोप मात्रै भएकाले सरकारले त्यसमा ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘विकसित मुलुकहरू खोपकै कारण सामान्य अवस्थामा फर्किसके,’ उनले भने, ‘हामी कहिलेसम्म त्रासमा बाँच्ने हो । अब सरकारले ढिला गर्न हुँदैन ।’
जनप्रतिनिधिले अब सरकारले सबै छोडेर प्रत्येक नागरिकलाई खोप लगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको सबै शक्ति खोपमा लगाउने हो भने एक महिनामै प्रत्येक नागरिकलाई खोप पुर्‍याउन सकिन्छ,’ जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल भन्छन्, ‘अहिले हरेक वडादेखि पालिका तहसम्म सबै संरचना भएकोले खोप लगाउन सजिलो पनि छ ।’
‘गत वर्ष कोभिड संक्रमितको उपचारमा हामी जति त्रसित थियौं । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । यो खोपकै कारण हो,’ पर्वत अस्पतालमा कार्यरत डा. मानव तिवारीले भने, ‘संक्रमण देखिए पनि खोप लगाएका कसैमा समस्या देखिएको छैन ।’ खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी आफैं संक्रमित भए पनि ढुक्कले बिरामीको उपचारमा खट्ने मनोबल भएको उनको तर्क छ ।
खोपको प्रभावकारिताबारे पर्वत अस्पतालले गरेको सर्वेक्षणमा निकै राम्रो देखिएको नतिजा अस्पतालले सार्वजनिक गरेको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोविन्द गिरी पहाडीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यही जेठ ४ गतेसम्म ४ सय ४३ जना संक्रमितमध्ये दोस्रो खोप लगाएका १३ जना संक्रमित छन् । १० जना स्वास्थ्यकर्मी र ३ जना ६५ वर्षमाथिका संक्रमित रहेकोमा उनीहरूलाई संक्रमणले असर पारेको छैन ।
पहिलो खोप लगाएर संक्रमित भएका १४ जना रहेकोमा त्यो पनि ६५ वर्षमाथिका रहेका छन् । उनीहरूमा समेत खासै गम्भीर असर नदेखिएको अस्पतालले जनाएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत प्रवीण भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलगायत तीन हजार दुई सयले दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन् ।